Akaakuu Taattoo fi Kabala
Tarjaa fi Sarara
Tarjaa fi sararri taattoo makaa Taattoo tarjaa waliin sarara taattoo.
Addaba'oo ta'e tokko filadhu
Tarjaa fi Sararoota. Sarjaan reektangilii walfakkannee deetaa moggaa moggaadhaan kaafaman kanaaf gatii isaanii haala salphaan dorgomsiisi.
Tarjaa walirra tuullee fi Sararoota. Reektaangiliin sarjaa walfakkannee deetaa walii olitti kuufama kanaaf, dheerinni tarjaa ida'ama gatii deetaa mul'isa.
Siilloo y suuquu dandeessa Siiqqota-Suuqaa erga masaka xumurteen booda.
Sarjaan gara bitaa (yookan tarree gubbaa) hangi deetaa filamee deetaa akka wanta tarjaatti kenna. Sarjaan biroo yookan tarreen hanga deeataa sarara wantaatiif kenna. Mogaasa qaaqaa kana jijjiiruu Walfakkannee deetaa dandeessa.
Hanga deetaa filadhu.
Sarjaan walfaannee deetaa qabannoo tarree gubbaa irratti fi sararri walfaannee deeataa gara jala tarreetti argama.
Xiyya qabduu Olii fi Gadi fayyadami galfata filame tarree keessatti olii fi gadi siqsi. Haala kanaan walfakkaannee sarjaa deetaa gara walfakkaanne tarree deetaatti geedartee duubaatti deebisuu dandeessa. Kun tartiiba gabatee madda deetaa hin jijjiiru garuu qindaa'ina taattoo irrattii qofa jijjiira.
Gatiiwwan hammanga akaakuuwwan keessaa siiqqee x irratti akka moggaasaatti agarsiisamu.
Maalimoota taattoo saaguu
Maalimoota kamiyyuu kan armaan gadii saaguuf fuula maalimoota taattoo kan taattoo masaka gargarami:
Sararoota tarsaa argaman
Dabalata maalimootaf taattoo haalata gulaalaa keessaa baafata Saagi gargaarami.Akkasumas maalimoota armaan gadii hiikuu ni dandeessa:
Xiinannoo, fakkeenyaaf gatiiwwan gidduu galeessaa, dogoggora kabala y fi sararoota adeemsa
Moggaasa deetaa adda addaa tokko tokkoo deetaaa walfaanneef qindeessuuf, amaloota qaaqa deetaa walfaannee gargaarami.
Title is: Akaakuu Taattoo fi Kabala